Zimbabwean constitutional reform - but no guarantee of LGBT rights
Zimbabwean constitutional reform – but no guarantee of LGBT rights
The new constitution will not include protections against discrimination based on sexual orientation.
Zimbabwe still possesses British colonial era laws against homosexuality.
Members of the parliamentary select committee responsible for reforming the Zimbabwean constitution stated yesterday that the new constitution — which will be put to a referendum — will not contain language guaranteeing the LGBT community their rights, according to the Voice of America.
Given President Robert Mugabe’s stated opposition (he has stated that homosexual acts ‘degrade human dignity’ and that allowing it would be ‘allowing people to behave worse than dogs and pigs), and Prime Minister Tsvangirai’s equivocal position on the issue, the decision comes as no surprise, and public polls conducted in 2010 ‘indicated that a majority of Zimbabweans did not support including language in the new constitution to protect the rights of homosexuals.’
Discussing the debate amongst the committee, ZANU-PF select committee co-chairman Paul Mangwana stated that ‘the voices against [inserting an LGBT rights clause] were more than those for’.
In a country with already-strict laws against homosexuality, the Gays and Lesbians of Zimbabwe stated that without a clause protecting their rights, the community would find itself â€œfacing a multitude of human rights issues with no legal recourse.”
Tags: LGBTIRobert MugabeZimbabwe